९५ प्रतिशत अरबी कवि फोहोर हुन्
२०७४ भदौ २४ शनिबार ०९:५०:००
सिरियाली कवि अदोनिसको नाम नसुन्ने कमै होलान् । पेरिसमा निर्वासन जीवन बिताइरहेका अदोनिसले अरबी गद्य कविताको सुरुवात गरे । उनी २०१६ को नोबेल साहित्य पुरस्कारका लागि प्रवल दाबेदार मानिएका थिए ।
सन् २०११ यता सिरियामा चलिरहेको युद्धलाई लिएर अदोनिस विवादमा आइरहेका छन् । २०११ को सुरुतिर सिरियामा आन्दोलन चर्किएपछि अरबियन बौद्धिक जमात चाहन्थ्यो– अदोनिसले युद्धको आलोचना गरून् । उनी उचाइमा पुगेका कविको हैसियतमा मात्रै होइन, सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल आसादकै समुदायका भएकाले पनि धेरैले अदोनिस बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए । २०१६ कै जुनमा अदोनिसले आसादलाई प्रजातान्त्रिक सरकारको माग गर्दै एउटा खुला पत्र लेखे । त्यतिबेलासम्म आसाद सरकारले १४ सयभन्दा बढी नागरिकको हत्या गरिसकेको थियो । धेरैले अदोनिस ढिलो बोलेको र देखावटी आलोचना गरेको टिप्पणी गरे ।
यसै विषयमा केन्द्रित रहेर ८७ वर्षीय अदोनिससँग ‘न्युयोर्क रिभ्यु अफ बुक्स’का जोनाथन गुयरले लिएको अन्तर्वार्ता :
सिरियामा युद्ध सुरु हुँदै गर्दा तपाईंले राष्ट्रपति बसर अल आसादलाई एउटा खुला पत्र लेख्नुभएको थियो । अहिले उनलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– केही पनि सुधार भएको छैन । समस्या झनझन चर्किंदै छ । ४० देशको गठबन्धनले दुई वर्षसम्म आईएसआईएसविरुद्ध किन केही पनि गर्न सक्दैन ? जबसम्म धर्म र राज्यलाई अलग गरिँदैन, तबसम्म केही पनि हुनेवाला छैन । जबसम्म हामी के धार्मिक हो, के राजनीतिक हो, के सांस्कृतिक हो र के सामाजिक हो भन्ने कुरा छुट्याउँदैनौं, तबसम्म केही पनि हुँदैन । अरबको अवस्था झनझन जटिल हुँदै जानेछ । अब धर्म समस्याको समाधानका रूपमा रहेन । धर्म नै समस्याको जड हो । त्यसैले हामीले राजनीति र धर्मलाई अलग गर्नुपर्छ । सबै स्वतन्त्र मानिसको विश्वासलाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ । तर, समाजको आधारका रूपमा धर्म ? हुँदै हुँदैन ।
पछिल्लो समय तपाईं कहिले सिरिया जानुभएको थियो ?
– २०१० मा ।
युद्धभन्दा अघिको वातावरण बताउन सक्नुहुन्छ ?
– मलाई थाहा छैन । मैले पनि तपाईंले जस्तै समाचारबाटै थाहा पाएको हुँ । मलाई थाहा छ– सिरिया ध्वस्त भएको छ । तर, केका लागि ? के प्रोजेक्टका लागि ? हेर्नुस्, क्रान्तिकारीले त आफ्नो देश पो बचाउनुपर्छ । सत्ताविरुद्ध लडे पनि संस्था त बचाउनुपर्छ नि । मैले सुनें– अलेप्पोको बजार पूरै ध्वस्त भयो । यो सम्पत्तिजस्तो अर्को के हुन्छ, कसरी तिनीहरूले यसलाई ध्वस्त गर्न सके ? क्रान्तिकारीहरूले संग्रहालय लुट्दैनन् । क्रान्तिकारीहरूले क्रिस्चियन, अलावाइत भएकै भरमा मान्छे पनि मार्दैनन् । क्रान्तिकारीले याजिदिसजस्ता पूरै समुदायलाई लखेट्दैनन् । के यही हो क्रान्ति ? किन पश्चिमले यस्तो चिजलाई समर्थन गर्दैछ ?
सिरिया द्वन्द्वको बारेमा तपाईंको दृष्टिकोण अरबमा आलोचित भएको छ नि !
– तपाईंलाई थाहा छ, धैरै अरबियनले क्रान्तिकारीहरूबाट नियुक्ति पाएका छन् । तिनीहरूले सधैँ मेरो आलोचना गर्छन् । तिनीहरूले म क्रान्तिको पक्षमा नभएको आरोप लगाउँछन्, त्यस्तो क्रान्ति– जसले संग्राहलय ध्वस्त पार्छ ।
क्रान्ति के हो ? अनि को छन् त यसमा ?
– त्यो यसै हो भन्न सकिँदैन । एउटा लेखक कहिल्यै पनि नरसंहारको पक्षमा उभिन सक्दैन । तपाईंलाई थाहै छ, यो सम्भव हुने कुरा होइन । एउटा कवि वा पेन्टर कसरी विष्फोटक पदार्थको बेल्ट बाँधेर विद्यालयमा गएर आफैंलाई र विद्यालयलाई उडाउने व्यक्तिकै पक्षमा उभिन सक्छ ? कसरी सक्छ ? तिनीहरू अबोध बालक हुन् । कसरी तपाईं तिनीहरूलाई मार्न सक्नुहुन्छ ? यो कल्पनै गर्न नसकिने, अमानवीय र दानवी कार्य हो । यदि सरकार तानाशाही छ भने सरकारसँग लड न । बालबालिका र विद्यालयसँग किन लड्छौ ? देशलाई ध्वस्त नबनाऊ न । निर्दोष नागरिकको हत्या नगर न । सत्तासँगै लड । यो त आत्मसम्मानमा ठेस आउने काम हो । यस्तो समाजसँग जोडिनु पनि लज्जित विषय हो । यस्तो त मैलै इतिहासमा कहिल्यै देखेकै थिइन, पूरै देश ध्वस्त बनाउने यमनजस्तो, एउटा सन्की र मुर्ख राष्ट्रपतिलाई सबै सुम्पने । तपाईं देख्नुहुन्छ नि मानिसहरू यसैलाई समर्थन गरिरहेका छन् । तिनीहरूसँग कसरी लड्न सक्नुहुन्छ ? उनीहरूको पक्षमा नभएर तपाईंको आलोचना भएको होइन, तपाईं तिनीहरूजस्तै राक्षस बन्नुपर्छ ।
– जिहादी मात्रै होइन किनकि जिहादी पनि नागरिककै एउटा समूह हो । जो मान्छे यो चाहँदैनन्, उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै यसको निन्दा गर्नुपर्छ । यसका विरुद्ध कतै एउटा आधिकारिक धारणा पढ्नुभएको छ ? व्यक्तिगत रूपमा हामी जे भनिरहेका छौं, त्यस्तै भन्ने केही व्यक्ति भने छन् । तर, तपाईंले पढ्नुभएको होला अरब देशका आधिकारिक धारणा । ठूला राजनीतिक दलदेखि ठूला समूहको धारणा । त्यहाँ एक प्रकारको स्वीकार्यता देखिन्छ । धैर्य हुनु भनेको पनि एक प्रकारको स्वीकार्यता त हो । अरबमा भइरहेका घटनाप्रति एउटा पनि विरोध प्रदर्शन त्यहाँ देखिँदैन । यसको अर्थ के हो ? तिनीहरूले मान्छे मार्छन्, महिलालाई बजारमा बेच्छन् । तिनीहरूले संग्रहालय खरानी बनाउँछन्, जुन मानिसको ठूलो सफलता थियो । तर, पनि त्यसविरुद्ध एउटा वक्तव्य जारी हुँदैन, एउटा पनि विरोध प्रदर्शन हुँदैन ।
तपाईंको नयाँ पुस्तक ‘भायोलेन्स एट इस्लाम’मा आईएसआईएसले इस्लामको अन्त्य गर्ने भन्नुभएको छ । इस्लामको नयाँ सुरुवात हुने देख्नुभएको छ ?
– हामीमा आशाको दियो निभ्नु हुँदैन । के हुन्छ र ? यदि मानव सभ्यता र मानवता सकियो भने संसार पनि सकिन्छ । त्यहाँ म जस्ता व्यक्तिगत रुपमा आवाज उठाउने धेरै छ् । इजिप्टलगायतका देशमा मैलेजस्तै भन्नेहरू धेरै छन् । त्यसैले पनि हामीमा आत्मविश्वास हुनु आवश्यक छ कि हामीले समाधानको उचित उपाय भेट्टाउनेछौं । तर कहिले र कहाँ भन्ने कुराको तय समयले गर्नेछ । परम्परागत सोच र मान्यता राख्ने अरबमा यो कुरा चाँडै होला भन्न त सकिन्न । आईएसआईएस भनेको निभ्न लागेको मैनबत्ती जस्तै हो, जुन निभ्न लाग्दा बेस्सरी बल्छ । त्यस्तै हो आईएसआईएस पनि, सकिने बेलामा जोडले चिच्याइरहेका छन् ।
पुनर्जागरणका लागि समय लाग्छ । पन्ध्रौं शताब्दीमा पहिलो इस्लामिक स्टेट बनेको थियो । त्यति बेलादेखि नै हाम्रो समाज नागरिकको समाज हुन सकेको छैन । नागरिकका कर्तव्य र अधिकारहरू सँगै आउँछन् । अरब समाज त केही व्यक्तिहरूले चलाएका छन्, जहाँ कर्तव्य उस्तै भए पनि अधिकार फरक–फरक हुन्छन् । उदाहरणका लागि मुस्लिमले जे अधिकार पाएको हुन्छ, त्यो क्रिश्चियनले पाएको हुँदैन । पन्ध्र वटा शताब्दी पार गरेर यो अवस्था आएको हो । कसरी हामी एक–दुई हप्तामा पन्ध्र शताब्दीमा बिग्रेका कुरा सच्चाउन सक्छौं ? मलाई विश्वास छ– त्यस्तो समय आउनेछ । अहिलेको भन्दा बिल्कुलै भिन्न परिस्थितिमा ।
परिवर्तनका लागि पश्चिमसँग नयाँ शिराको सम्बन्ध हुनु जरुरी छ ? मैले तपाईंको कवितामा पढेको थिएँ, जहाँ आइफेल टावर भूमध्यसागरमा तैरिरहेको थियो, जहाँ अबु नवास र भिक्टर ह्युगोको वार्तालाप थियो । अरब र पश्चिमको पुलको रूपमा ...
– पूर्व र पश्चिम भन्ने कुरा सैन्य अवधारण हो । यो उपनिवेशवादले जन्माएको कुरा पनि हो । हामी भौगोलिक रूपमा पश्चिम र पूर्व भन्न सक्छौं । अर्थशास्त्र र उपनिवेशवादले यसको फाइदा उठायो । तर, कलामा पूर्व र पश्चिम भन्ने कुरा छैन । तपाईंले पल क्लीको पेन्टिङ हेर्नू न, उनी ट्युनिसिया र पूर्वी अरबबाट कति प्रभावित भएका छन् । डेलाक्रोइक्सकै पेन्टिङ पनि त मोरक्कोबाट प्रभावित भएको देख्नुहुन्छ । ‘रिम्बाउड’ पढ्नुस् न, उनी पश्चिममा जन्मिए पनि उनी पश्चिमी नभएको देख्न पाइन्छ । जब तपाईं अबु नवास र अबु अल मारीलाई पढ्नुहुन्छ, तपाईंले पूर्वी र पश्चिमी भनेर छुट्याउनुहुन्न । सर्जकहरू एउटै संसारका हुन्– चाहे उनीहरू जहाँ जन्मिएका हुन् । उनीहरू कुनै भौगोलिकतामा नबाँधिइकन एकै ठाउँमा बस्छन् । उनीहरूलाई कुनै भाषा र राष्ट्रियताले अलग गर्दैन किनकि उनीहरूलाई मानिसको सिर्जजशील संसारले एउटै सूत्रमा बाँध्ने काम गर्छ । यो अर्थमा पूर्व र पश्चिम भन्ने कुरा नै छैन । मेरा लागि वाल्ट ह्विटम्यान अबु तम्मामजस्तै हुन् । उनी मेरा हुन् अनि म उनको हुँ ।
तर पश्चिमले एक किसिमको विकसित समाज विकास गरेको छ, जुन अरबमा देखिँदैन !
– युरोपले जुन समस्या भोगिरहेको छ नि, त्यो नयाँ समाजको विकासले नै निम्त्याएको हो । मध्य युगको युरोप पनि धर्म र चर्चले नै चलेको थियो । त्यतिबेलाका चर्च अहिलेका जिहादीहरूजस्तै थिए । उनीहरूले मान्छे मार्ने र जलाउने गर्थे । पश्चिमी समाजले आफूलाई यस्तो कुराबाट अलग गराउन सफल भयो । त्यहाँ त्यस्तो कारण छैन कि यिनै कुराबाट अलग हुन चाहेको अरबलाई रोक्ने । हामी यसैका लगि त संघर्ष गरिरहेका छौं ।
सत्ता र धर्मलाई उचित ढंगबाट कसरी अलग गर्न सकिन्छ त ?
– फेरि सुरुवातबाटै सुरु गर्ने । यसमा संघर्ष आवश्यक छ । यसलाई तपाईंले बसेर गर्न सक्ने कुरै होइन । तपाईं उठ्नुपर्छ र लड्नुपर्छ, लेख्नुहोस् र जेल जानुहोस् । मलाई अचम्म लाग्छ– किन अरबका जेलहरू लेखकले भरिएका हुँदैनन् ? यसको अर्थ उनीहरूले काम गरिरहेका छैनन् । उनीहरू आलोचना गरिरहेका छैनन् । उनीहरूले जीवनको मूल मुद्दामा बोल्दै बोलेका छैनन् । वास्तविक समस्याका बारेमा उनीहरूको आवाज उठेकै छैन । मेरो आलोचना लेखकहरूप्रति हो, राज्यप्रति होइन । लेखकहरू सधैँ जेलमा हुनुपर्छ, जसको अर्थ उनीहरू सत्य बोलिरहेका छन् । जेलबाट बाहिर निस्कनु भनेको उनीहरू सत्य बोलिरहेका छैनन् । जतिबेला उनीहरूका धेरैभन्दा धेरै पुस्तकमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ, तब मात्रै त्यो संस्कृतिको भूमिकाको चर्चा हुन्छ ।
सिरिया युद्ध चलिरहेकै समयमा कविता लेख्नु कस्तो कुरा हो ?
– तपाईं कवितालाई बमसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्न । यस्तो तुलना गर्नु गलत हो । एउटा निच गोलीले सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ, महान व्यक्तिलाई मार्न सक्छ, उदाहरणका लागि केनेडी । तर तपाईं यस्तो तुलना गर्नै सक्नुहुन्न । कविता बनाउनु भनेको हावा बनाउनुजस्तै हो । अत्तर बनाउनुजस्तै हो अनि श्वास लिनुजस्तै हो । यसलाई भौतिक मापदण्डबाट निर्धारण गर्न सकिँदैन । त्यसैले कविताले जहिले पनि युद्धको घृणा र तिरस्कार गरेको हुन्छ । तर, जब युद्ध सकिन्छ, कविताले युद्धमा ज्यान गुमाएकाप्रति सहानुभूति राख्न सक्छ । त्यसपछि कसैले लेख्न सक्छ तर यो युद्धको भाग भने कदापी हुन सक्दैन ।
आईएसआईएस र ओसामा बिन लादेनले पनि कविता लेखेको कुरालाई कसरी हेर्ने ?
– यो कविता होइन । यसलाई कविताका रूपमा हेरिनु हुँदैन । कविता त सामाजिक कुरा हो । जब संस्कृतिको जीवनको एउटा पाटोको रूपमा हुन्छ, तब सबै कवि हो, सबै उपन्यासकार हो । अहिले तपाईंसँग हजारौं उपन्यासकार छन् । तर तपाईंले तीमध्ये कुनै पाँचलाई पढ्नयोग्य पाउनुभयो भने तपाईं ठीक ठाउँमा हुनुहुन्छ । अमेरिकामा तपाईंले हजारौं उपन्यास पाउनुहुनेछ, मुश्किलले चार–पाँच वटा राम्रा पाउनुहुन्छ, अरु सबै फोहोर हुन् । त्यस्तै हो अरबमा पनि । सबै अरबी कवि हुन् तर ९५ प्रतिशतचाहिँ फोहोर ।
तपाईंले हालसालै इमिग्रेसनलाई अरब संस्कृतिको पाटो हो भनेर लेख्नुभएको थियो । अहिले हामी युरोप र मध्यपूर्वमा बसाइसराइकै समस्या भोगिरहेका छौं । यसबारे केही भन्नुहुन्छ कि ?
– मैले जहिले पनि बसाइसराइ दुई कारणले भएको देख्छु । एउटा– स्वतन्त्रताको अभावले, अर्को– काम नहुनाले । त्यसैले मानिसहरू स्वतन्त्र ठाउँ र काम पाइने ठाउँको खोजीमा हुन्छन् । अरब देशहरू गरिब पनि छन् । २ सय वर्षसम्म एउटा राम्रो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकेन । स्रोतहरू हुँदाहुँदै पनि हामी बेकारका हतियारमा खर्च गरिरहेका छौं । हामी हतियार किन्छौं, हामी विमान किन्छौं । हामी परम्परागत नै छौं । हामी अझै मध्य युगमै छौं । तपाईं मलाई आधुनिक समयको प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ । कायरोमा विदेशी कार र विश्वविद्यालय देखेर मख्ख पर्ने स्थिति छैन । हामी कार उत्पादन गर्न सक्दैनौं, हामी कफीको कप बनाउन सक्दैनौं । हामी कसरी आधुनिक हुन सक्छौं ? पश्चिमका राजनीतिज्ञले हामीलाई मूर्ख बनाइरहेका छन् । तपाईं त विद्वान हुनुहुन्छ । तपाईंले यो तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ ।
हालसालै तपाईंले अरबको पहिचानको मुद्दा उठाउनुभएको छ, जस्तो म को हुँ ? हामी को हौं ? यसबारे प्रष्ट पारिदिनुस् न ।
– यो अरबको मात्रै समस्या होइन । सम्पूर्ण मानव जगतकै हो । यसको उत्तर धर्मले नै दिएको छ । क्रिश्चियन क्रिश्चियन हो, यहुदी यहुदी, मुस्लिम मुस्लिम । म जेमा विश्वास गर्छु, उसले पनि त्यसैमा विश्वास गर्छ भने म उसलाई चिन्छु नत्र चिन्दिनँ । त्यसैले पनि धर्मको परिभाषा दिन कठिन छ । अधार्मिक व्यक्तिहरूको लागि त पहिचानको कुरा एकदमै जटिल छ । मान्छे जति बाँच्छ, उसको पहिचान पनि बदलिँदै जान्छ । यदि ऊ कवि छ भने मृत्युपश्चात् पनि उसको पहिचान सकिँदैन । उसलाई समय–सन्दर्भअनुसार फरक–फरक प्रकारले बुझिन्छ । यो अर्थमा पनि कविता धर्मको विरुद्धमा छ । यो धर्मसँग जानै सक्दैन । मेरो मतलब अरबको इतिहासमा तपाईं एक जना पनि कवि भेट्नुहुन्न, जो धार्मिक थियो । यो भन्न कठिन हुन्छ कि यी महान र ठूला कवि धार्मिक थिए । यदि उनी धार्मिक थिए भने सुफीजस्तै थिए होलान्, जसले भगवानमा विश्वास राख्छु भन्छ । जुन भगवान इस्लामिक भगवानभन्दा बिल्कुल फरक हुन्छन् । मान्छेको वास्तविक शक्ति भनेको उत्तर दिनु होइन, प्रश्न गर्नु हो ।
७० वर्ष पहिले तपाईंले आफ्नो नाम अदोनिस राख्नुभयो ...
– होइन, मैले धर्मको संसारबाट बाहिर आउनका लागि नाम सिर्जना गरेँ ।
तर अहिले त्यो नाम...
– एउटा अपराध भएको छ ।
किनकि यो नाम अरबी र मुस्लिम नभएकाले आलोचना भइरहेको छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ– धार्मिक संस्कृतिले सबै प्रकारका संस्कृतिलाई बढारिरहेको छ ।
त्यसो भए अरब संस्कृतिको भविष्य कस्तो छ त ?
– मैले तपाईंलाई भनें नि, जबसम्म मृत्यु र माया रहन्छ, कला पनि बाँचेकै हुन्छ । चिन्ता नगर्नुस् । पाठक थोरै छन्, त्यो ठीक छ । नित्से, जो आधुनिक विचारधाराका प्रतिपादक थिए, उनको जीवनकालमा उनलाई कसैले पनि पढेनन् । कसैले चिनेकै थिएन उनलाई । कलाको भाग्य सधैँ यस्तै हुन्छ । धेरै प्रकाशित हुन्छन्, लाखौं बिक्री हुन्छन्, अधिकांश अर्थहीन हुन्छन् ।
अनुवाद : उपेन्द्रराज पाण्डेय
– न्युयोर्क रिभ्यू अफ् बुक्सबाट